IXESHA LE-100 ELIKHULU LE-7 [I-SPOILERS], UNXIBELELWANO LWELI XESHA KUNYE NEXESHA ELIDLULILEYO, IQONGA ELINOMDLA - IINKQUBO ZETV
I-100 yimidlalo yaseMelika yasemva kwe-apocalyptic yesayensi yeqonga yeTV eyaqala ngo-Matshi 19, 2014, kwi-CW. Umphuhlisi we
I-100 yimidlalo yaseMelika yasemva kwe-apocalyptic yesayensi yeqonga yeTV eyaqala ngo-Matshi 19, 2014, kwi-CW. Umphuhlisi wolu ngcelele uJason Rothenberg usekwe ngokukhululekileyo kuthotho lwenoveli enegama elifanayo nguKass Morgan. Olu luhlu luyafumaneka kwiNetflix.
Ikhulu labantwana babuyela emhlabeni emva kokuba lithe lajika lingahlali. Kuvakala kumnandi kwaye uqhelekile? Ewe kunjalo. Uchungechunge lwe-post-apocalyptic,I-100iyabuya kwiXesha lesi-7! Ewe, iziphekepheke, iinkqubo eziphuculweyo ze-AI, iirokethi, yonke into ibuyela kuthi. Ngolwazi oluthe kratya, qhubeka ufunda.
Ixesha le-100 le-7: Umhla wokuKhutshwa kunye neNqwelomoya
Ngexesha lokuqala leXesha le-6, I-CW iqinisekisile ukukhutshwa ufakelo lwesixhenxe lomboniso kungekudala. Nangona kunjalo, ukupapashwa akukacuthwa kumhla othile. Eyona nto sibheja ngayo iya kukhutshwa embindini we-2020.
Ngelixa abalandeli banokufumana iividiyo ezininzi ezinxulumene nexesha le-7, akukho namnye kubo osemthethweni. Okulusizi kukuba, akukho zinki okanye iinqwelwana ezisemthethweni ezikhoyo phaya nge-CW okwangoku. Kodwa silindele enye kungekudala.
Ixesha le-100 leXesha lesi-7: Iinkcukacha zeCast
Ukuqala ngomdlali ophambili, umlingiswa kaClarke Griffin ngokungathandabuzekiyo uya kubuya, kwaye uEliza Taylor uzakudlala loo ndima. Nangona kunjalo, i-wbakholelwa ukuba uEliza uza kukhatshwa nguMarie Avgeropoulos odlala u-Octavia Blake, uBob Morley odlala uBellamy Blake, uChristopher Larkin odlala iMonty Green, kunye noLindsey Morgan odlala iRaven Reyes.
Ngaba akukho umdlalo akukho ubomi ukufumana isizini yesibini
Akukho luhlaziyo lwaseburhulumenteni lukhankanyiweyo malunga namalungu amatsha kolu ngcelele.
Ixesha le-100 leNdawo ye-7: Yintoni onokuyilindela kwiXesha lesi-7?
Kwisavenge sesixhenxe, umntu unokulindela ukuba umgca webali uza kuthabatha esiphelweni seXesha lesi-6.Akukho kutsiba ngokukhawuleza, Oku kuthetha ukuba abalandeli baya kuba bebona indlela uBellamy aza kuzama ngayo ukuqonda ukuba kwenzeka ntoni kanye nodadewabo kwaye njani. abalandeli bebengaboni okwenzekileyo e-Octavia. Nangona kubonakala ngathi ufile, nantoni na enokwenzeka. Ke, abalandeli kufuneka balinde kwaye babukele. Kwaye inyani, abalandeli balindele ukujika okukhulu apha. Ixesha le-100 le-7 lilindele ukubandakanya iziqendu ezili-16, ezintathu ezingaphezulu kwesiqhelo.
Imithombo yethu icebisa ukuba nangona uJason Rothenberg watsho ukuba iya kuba lixesha lokugqibela kwi-100, inokuthi ibonelele ngendlela enokubakho ngaphambili. Iya kuba yinto emangalisayo, akunjalo? Kodwa ukuze siqiniseke, kufuneka silinde kancinci ngaphambi kokuba kuboniswe i-CW. Kwaye oabanethemba lokufumana impendulo elungileyo evela kubenzi kunye nabavelisi bolu ngcelele.
Ukufumana uhlaziyo oluthe kratya malunga nemiboniso bhanyabhanya oyithandayo kunye neemovie, hlala ekhaya, uhlale ukhuselekile, kwaye uhlale uqhagamshelene!
Iimuvi ezigqwesileyo ze-2019
Iifilimu ezintsha zepocalyptic
Uya kukhululwa nini umqhuli
ii-animes ezinje ngobugcisa bekrele kwi-Intanethi